Isithenjwa seChiefs singeniswe esibhedlela ngenxa yokuxinwa yisifuba | News24
Isithenjwa seChiefs singeniswe esibhedlela ngenxa yokuxinwa yisifuba
Cape Town – Unozinti weKaizer Chiefs, u-Itumeleng Khune, kubikwa ukuthi ungeniswe esibhedlela ngenxa yenkinga yesifuba nokuyikhona okwenze wangadlala emdlalweni we-Absa Premiership neSuperSport United ngoLwesithathu.
Lo mdlali weBafana Bafana oneminyaka engu-30 ubudala kubikwa ukuthi akazange adlale emdlalweni wangaphambilini wamaGlamour Boys ngenxa yenkinga efanayo yokugula, nalapho kubukeka sengathi lokhu kugula kuye kwamqinisa njengoba egcine engeniswe esibhedlela.
OLUNYE UDABA: Baxter umemezele isikwati seBafana esizodlala kowokuhlungela eyomhlaba
Kubukeka sengathi manje uKhune angase angadlali emdlalweni weBafana uma ngabe isibhekene neCape Verde emidlalweni emibili ebalulekile ezayo yokuhlungela umqhudelwano we-2018 Soccer World Cup ngoSepthemba, nokusho ukuthi umqeqeshi, uStuart Baxter, kungenzeka kudingeke ukuthi athole unozinti ozovala isikhala sakhe.
Khonamanjalo, lowo obenguzakwabo kwiChiefs, uGeorge Lebese, ufisele lo mdlali ongowokuzalwa eVentersdorp okuhle njengoba eqhubeka nokululama.
Lo mdlali ubhale ku-Instagram wathi, “Iba ngcono ngokushesha, bhuti wami.”
Ngaphezu kwalokho, unozinti we-Orlando Pirates, uJackson Mabokgwane, naye wengeze ngokuthi, “Iba ngcono ngokushesha mngani wami”.